Danieri akaona Chikara chine Nyanga gumi – marudzi gumi evatorwa akabatsira kuparadza Hushe hweRoma neKutangwa kweKereke yeRoman Catholic mumatongo mahwo.
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Danieri akaona Chikara chine Nyanga gumi – marudzi gumi evatorwa akabatsira kuparadza Hushe hweRoma neKutangwa kweKereke yeRoman Catholic mumatongo mahwo.
Danieri akaona Chikara chine Nyanga gumi – marudzi gumi evatorwa akabatsira kuparadza Hushe hweRoma neKutangwa kweKereke yeRoman Catholic mumatongo mahwo.
Marudzi gumi evatorwa akabatsira kuparadza Hushe hweRoma nekutangwa kwekereke yeRoman Catholic mumatongo eHushe hweRoma.
Mubatanidzwa wenyika dzekuEurope (European Union) dzine simba wakaona kuti kubatana kwawo kwaive panjodzi nekuda kwekuuya kwevapoteri nevanhu vazhinji vaitiza kubva kunyika dzavo.
Hushe hwaive nesimba hwekumadokero hweRoma hwakaiswawo panjodzi nevapoteri vemarudzi evatorwa, nevanhu vaitama kubva kunyika dzavo uye vapambevhu.
Marudzi evatorwa akatanga kubva kunyika dzavo achipinda muhushe hweRoma hwekumadokero sezvo yaive yakabudirira kwazvo. Saka vauyi nevapambevhu vakakonzeresa kuparara kweHushe hweRoma.
Pamepu inotevera Hushe hweRoma yekumadokero hunoratidzwa neruvara rwegirini. Hushe hweRoma yekumabvazuva hunoratidzwa neruvara rweyero. MaHani vakauya kubva kure kwazvo kuAsia. Kupandukirana muChina kwakaita kuti vanhu vatize vachisairira maHani ivo vakazosairirawo mamwe marudzi evatorwa achipinda muHushe hweRoma yekumadokero.
DANIERI 7:7 "Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mhuka yechina, yaityisa nokuvhundusa, ine simba guru kwazvo; yakanga ina meno makuru outare; ikapedza, nokuvhuna-vhuna, nokupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo; iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira; yakanga ine nyanga gumi.
Danieri akaona Hushe hweRoma yemapegani hwaive nehuwori huri chikara chinonyangadza, chakaipa. Nyanga gumi, dzaionekwa mumusoro macho, dzaimiririra marudzi gumi evatorwa.
Chikara ichi chinomiririra hushe hweRoma hwaive hwakura kuita simba guru asi hwakavodzwa. Vabati vaitonga sevadzvanyiriri. Mubati Tiberio aive munhu akaipa aibata vana chibharo, mubati Karigura aive akatodhakwa nesimba achitofunga kuti aive Mwari. Mubati Nero aiuraya maKristu achivapomera nekuda kwekutadza kwake kwaakaita paakapisa Roma. Chikara cheRoma ichi chaive nehuwori kwazvo zvekuti chaisataridzika sechisikwa chipenyu chaicho.
Nyanga gumi dzakabuda mumusoro macho. Nyanga nhatu kana marudzi evatorwa akaparadzwa kuitira kupa kanyanga kaduku nzvimbo kanyanga kaimiririra kusimuka kwekereke yeRoman Catholic kusvikira Pope atanga kutonga ari paVatican kaguta kanyika kaduku duku pasi rese. Nyanga mucherechedzo wesimba remhuka. Marudzi gumi evatorwa aizobatsira pakuparadza hushe hweRoma vachizobatsira zvakare, imwe nguva yaizouya, kutanga kusimuka kwesimba remaPope semusoro wekereke yeRoman Catholic.
Nyanga duku kana simba mucherechedzo weVatican kaguta kanyika kakakura sikweya mita rimwechete kukatenderera. Kane vanhu vanoda kuita mazana matanhatu uye ndiko nyika dukusa pasi rese. Vatican iri muRoma, pedyo nezvikomo zvinomwe zveRoma. Mutsetse webhuru mucherechedzo wemasvingo akavakwa kupoteredza zvikomo zvinomwe zvekutanga zvaiita guta reRoma.
Vatican ndicho chikamu chikuru chekereke yeRoman Catholic asi pamutemo, muzinda wekereke uri paLateran Palace neBasirika (kana kereke huru) pachikomo cheCaelia (zvakaratidzwa serekitengo yevhayoreti). Ikoko Pope, sezvo ari iye ega mudzvanyiriri kumadokero eEurope, anotonga Roman Catholic pasi rese nenzira dzedzidziso dzakaitwa nevanhu uye tsika dzevanhu. Kuita kwechitendero kwekudzidzisa tsika dzekereke dzisimo muMagwaro uku kwakapararira pasi rese kukatapawo vemaSangano akabuda muchiCatholic nekuti vaipikisana nedzidziso dzayo. Saka zvinotendwa nemakereke emasangano, akatangira muRoma, zvakaisa nyika pamateru anokoromoka akananga kunotongwa.
10 Rwizi rwomoto rwakanga rwuchibuda ruchibva pamberi pake; zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine gumi zvezviuru zvine gumi; kutonga kukatanga, bhuku rikazarurwa.
Kusimuka kwenyanga duku (hurongwa hwezvinzvimbo zvekereke paVatican) kupfurikidza hutungamiri hwevanhu hwehudzvanyiriri uye tsika dzakaitwa nevanhu zvinomiririrwa “nemuromo uchitaura zvinhu zvikuru”. Tsika dzechitendero dzakaitwa nevanhu dzinonzi dzinopa ruponeso kuvazhinji. Kereke yakabva yasimuka kuva nesimba pamusoro penyika nekutaura kuti vanoregerera vakatadza nekupira uye kunamata kuna Petro kuti varegererwe zvitadzo zvavo. Meso anotaura pamusoro pekuchenjera. Meso emunhu anotaura pamusoro pehuchenjeri hwevanhu hunotsvaga ruponeso nekuita mamwe mabasa akanaka nekutenda mutsika dzekereke dzakaitwa nevanhu.
Chinhu chikuru chainyanya kukosheswa naDanieri kwaive kuparadzwa kwehushe hweRoma nekumuka kwahwo yava kereke yeRoman Catholic yakamuka kubva mumatongo ehushe hweRoma ikapararira pasi rese.
Rudzi rweKutanga MaHani
Nhandare yaive yateiwa kuti Hushe hweRoma yekumadokero huparadzwe nerudzi runotyisa rwekuAsia rudzi rwemaHani. Kupandukirana muChina kwakakonzera kurwisana apo marudzi nemarudzi airwisana, vachidzingana kubva muChina vakananga muRoma. Rudzi rwaive rwakaipa rwusina tsitsi pamarudzi aya ese rwaive rwemaHani.
Mutungamiri wavo mukuru aive nemoyo wakaipa kwazvo aive Attira. Kubva mugore 375 AD maHani vakasairira marudzi evatorwa vachipinda muhushe hweRoma vakazvivakira ivo hushe hukuru hwaive hwakavakidzana nehushe hweRoma. Ruzhinji rwevapoteri vaitiza hutsinye hwemaHani rwakasika dambudziko guru murudzi rwevanhu apo vafambi vazhinji ava vakaona marudzi evatorwa achizvitorera nzvimbo huru kwazvo muhushe hweRoma. Sezvo rudzi rwemaHani rwaive rudzi rwaisagara panzvimbo imwechete rwakarwisa nzvimbo zhinji vakaita kuti zviomere hushe hweRoma kuti hurwire miganhu yahwo.
Atira akaramba achipamba hushe hweRoma sezvakaratidzwa nemutsetse webhuru pamepu iri pamusoro apa. Attira akasiya gwara remarwadzo zvaisanganisa maguta akaparadzwa nekutorerwa zvinhu nechisimba. MaRoma vakamudaidza kuti Denda raMwari. Muna 452 AD Attira akaparadza Italy yekumusoro akatendeuka akananga kuRoma. MaRoma aive asingagoni kuzvidzivirira kubva kwaari saka Pope Leo I akakwira achibva kuRoma kunosangana naye akamupa mari zhinji yechiokomuhomwe yaakatora muhomwe yekereke. Attira akabva adzokera, Roma ikapona.
Attira paakadzokera mbiri yaPope Leo yakawedzera kwazvo. Saka Attira muHani akabata basa, zvisingapikiswe, kudarika vamwe vese vakazotevera pakusimbisa chinzvimbo chaPope pakati pevanhu veRoma nevemarudzi evatorwa. Vanhu vaisaziva pamusoro pechiwokomuhomwe chaaive amupa. Vakafunga kuti Pope ane simba remweya unoshamisa pamusoro pemarudzi evatorwa anotyiwa kwazvo, Attira mukuru, akazofa chinguvana mumashure meizvi. Leo I akabva atanga nheyo dzechinzvimbo chine simba kwazvo muNguva yeRima kana Nguva dzePakati, mambo – Pope weRoma.
Makore gumi nemashanu mumashure merufu rwaAttira, hushe hwemaHani hwakaparara. Asi vaive vatanga kuparara kwehushe hweRoma nekusundira kwavaive vaita marudzi mazhinji evatorwa muhushe hweRoma. Nekudzokera kwaakaita mumashure mekutaura naPope, Attira akapa Pope rukudzo rukuru mumaziso evanhu semutungamiri akasimba muhushe hweRoma yekumadokero.
Rudzi rweChipiri MaHeruri
Mumvonga-mvonga yaibatanidza kupambwa kwehushe hweRoma neruzhinji rwemarudzi evatorwa rwaipotera nekutamira kunogara muhushe uhu, marudzi akati kuti aizobatana kana kuti mapoka maduku emarudzi akasiyana aizopinda kuva chikamu cherudzi rwakati kurei vakabatana vakasarudza Odoacer aive asimuka kuva mukuru wemauto eRoma semutungamiri wavo vakabva vamugadza kuti ave mambo weItaly.
Hushe hweRoma yekumabvazuva hunoratidzwa neyero.
MaHeruri vaive vatova muItaly kare saka zvaive nyore kuna Odoacer kuti atumire mubati wechiduku Romulus Augustulus kumudyandigere muna 476 AD. Akatonga Italy kusvikira auraiwa muna 493 AD.
Saka Odoacer aive mukuru werudzi rwemaHeruri ndiye akazoparadza hushe hweRoma yekumadokero.
Nzvimbo ine ruvara rwegirini pamepu iri pamusoro inoratidza nzvimbo dzakatongwa nemaHeruri.
Hushe hweRoma yekumabvazuva pasi pemubati Zeno aitonga kubva kuConstantinople hwakaratidzwa muruvara rweyero.
Dambudziko rake raive rekuti maHeruri vaive maKristu aisatenda muTiriniti sezvaiitwa naPope. Pope aive asina shungu dzekutongwa nevaaidaidza kuti vapanduki.
Mubati Zeno akabva azoudza Theodoric muOstrogothi, aive pakati paZeno nemaHeruri kuti aende muItaly anoparadza maHeruri. Ichi chaive chiitiko chekutanga pazviitiko zvitatu zvekunatswa kwemarudzi kupfurikidza kubvisa marudzi evatorwa asingatendi kuTiriniti. Pakati pegore 489 negore 493 Theoderic nemaOstrogoth ake, mukuratidzira kwaive nehutsinye, vakaparadza rudzi rwemaHeruri.
Saka nyanga imwechete yerudzi rwaisatenda muTiriniti, rudzi rwemaHeruri, yaive yadzurwa nemidzi yayo kuitira kuti Pope aparidze dzidziso yake yeTiriniti. Asi zvakadaro kuna Pope, Theoderic aivewo asingatendi kuTiriniti aitenda kudzidziso dzevatorwa.
Theoderic aive nesimba kwazvo ishe wezvehondo nemubati wekumabvazuva anoparadza. Saka Pope akararama pasi pemuOstrogoth “aimupikisa” padzidziso dzake kusvikira pakufa kwaTheodoric muna 526 AD.
Mugore 527 Justinian akaitwa mubati muConstantinople akaronga kutapazve hushe hweRoma yekumadokero.
Rudzi rweChitatu MaVhandari
MaVhandari vaive vafamba rwendo rurefu vachipinda nemuhushe hweRoma (zvakaratidzwa nechinongedzo cheruvara rwebhuru pamepu inotevera) vasati vayambuka gungwa reMediterranean vachipinda muNorth Africa mavakanopamba vakazvigadza sevatongi.
Kuti vatape zvakare Italy, mukuru wemauto aJustinian Belisarius akatanga kupamba North Africa achifamba nemumvura kubva kuConstantinople muna 533 AD (zvakaratidzwa nechinongedzo cheruvara rwevhayoreti rwakaita kunge pepo) akakurira maVhandari mukati memwedzi mishoma yehondo yakaipisisa.
Chainakidza, chaive chekuti panguva iyi kwaive kwasara marudzi maviri chete aisatenda Tiriniti maVhandari nemaOstrogoth. Nekubvisa maVhandari muNorth Africa, Belisarius akadzura nyanga yechipiri rudzi rusingatendi kuTiriniti rwaipikisa Pope. MaVhandari nemaHeriri aisatenda kuTiriniti vakabviswa vakanyangarika kubva munhorondo, saka kusatenda kwavo kuTiriniti kwakanyangarika pamwechete navo. Zvinyorwa zvenhorondo zvinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vakafa muhondo idzi, nenzara, uye hosha muNorth Africa.
Rudzi Rwechina maOstrogothi
Nzvimbo dzehushe hweRoma yekumadokero yaigarwa nemaOstrogoth yakaratidzwa pamepu iri pamusoro muruvara rwegirini.
Belisarius akabva aenda kuSicily nezvikepe akanorwisa Italy mune yaizoita hondo yemakore makumi maviri yaive yakaipa nekuparadza apo kurwa kwakatenderera kuchikwira nekudzika muItaly. MaOstrogothi mamiriyoni gumi nemashanu vakauraiwa zvichibva pazvinyorwa zveProcopius, apo rudzi rwechitatu rwaipikisa (rwaisatenda kuTiriniti) nyanga yarwo yakadzurwa nehutsinye hwairwadza. Nzara nehosha yakabata pasi rese yakatsvaira Europe kwemakore anoda kuita makumi maviri yakauraya vanhu vari pakati pemamiriyoni makumi mashanu nemamiriyoni zana Europe yakapinda muNguva yeRima apo Pope akabvisirwa rumwe rudzi rwaimupikisa rwaisatenda Tiriniti. Europe yakapinda mumakore anoda kusvika mazana mapfumbamwe eNguva yeRima apo chiedza chakadzima Tiriniti ikaita iyo yega dzidziso yekereke isina anopikisa. Ndicho chikonzero nei Tiriniti yakasimbiswa zvakanyanya mumakereke nanhasi.
Mumvonga-mvonga nekurwadziwa kweNguva yeRima, Pope weRoma akatanga kuita zvirongwa muItaly zvaisagona kuitwa nemubati weRoma wekumadokero. Pope akaita mabasa ekubatsira akawanda akapa vashandi vehurumende mari dzemihoro yavo kubva muhomwe yekereke kuti zvinhu zvirambe zvichifamba zvakanaka munyika. Saka vanhu vakatanga kuisa tariro kuna Pope semutungamiri munezvese zvechitendero uye zvematongerwo enyika kuMadokero.
Hosha yaJustinian pakati pegore 541 negore 542 AD yakaparadza hafu yevanhu vemuConstantinople. Makonzo aive muzvikepe akaparadzira chirwere ichi munyika dzakapoteredza Mediterranean chikauraya kota yevanhu chikazosvikawo kuEngland nekuIreland muna 549 AD.
Vanhu vazhinji muEngland vakafa zvakaita kuti zvive nyore kuti maAngles nemaSaxon vapambe nekutora nzvimbo huru muEngland.
Rudzi rwechiShanu maAnglo-Saxons
MaAngro nemaSaxon akapinda muEngland pakaparara hushe hweRoma yekumadokero vakasvikogara vachizviti maAnglo-Saxon.
Mutumwa waMwari kukereke yechina Columba aive chiedza chakajeka chakaonekwa nguva yekereke yechina yakuda kutanga muna 606 AD. Iyi ndiyo yaive nguva yerima, saka Columba aisakwanisa kuva aripo munguva yacho chaiyo sezvo chiedza chake chaizoita kuti isave nguva yerima.
Muna 563 Columba akaita nzvimbo dzainzi mamonesitiri kana maabeyi pachitsuwa cheIona, iripo tichangobva pamahombekombe ekumadokero eScotland. Nzvimbo iyi yaive isina hosha iyi sezvo kwaive kusina zvikepe zvakasvikira ikoko. Aive mumishinari kumaScoti (vaidaidzwa zvakare kuti Pics) ndiko kwaakararamira nguva zhinji yehupenyu hwake. Vateveri vake vakabuda kunoenda kunoita chimishinari muEngland mukati menzvimbo zhinji dzehushe hweAnglo-Saxon uyezve muEurope, kunyanya pakati pemaFrank, kwaivakwa mamonesitiri. Minongedzo iri pamepu inotevera inoratidza kwaive kwakawandira kurudziro yake. Columba aive nehushumiri hune simba zvaive zvakatoomera chero munhu kuti akwikwidzane naye.
Akazofa muna 579 AD.
Satani aive akufanira kupfigira kurudziro yaColumba kuti Nguva yeRima ipindire.
Bertha, mukadzi wechiRoman Catholic aive akawanikwa namambo Kent akakurudzira mambo kuti atendere Roman Catholic, Augustine kuti atange kuparidza paCanterbury muna 597 AD.
Dzidziso dzaColumba kubva kumusoro kweEngland nedzidziso dzaPope dzichibva kuzasi kweEngland dzakasangana paWhitby muna 664 AD, monesitiri yaibatwa naHilda. Mambo weNorthumbria aiveko akasarudza kuti hushe hwake hwaizobatana neRoman Catholic nekuti vaive nechikonzero chakachenjera.
Vakati nekuti Jesu akapa Petro makiyi edenga, Petro ega ndiye aizogona kuzarurira munhu musuwo wedenga. Nekuti Pope akati ndiye aive akatsiva Petro (vachinyepa zvakare kuti Petro aive ambosvika kuRoma) vanhu veRoman Catholic vakati Petro aizozarura musuwo wedenga kuvanhu vaizvininipisa kuna Pope. Vateveri vaColumba havana kugona kukwikwidzana neizvi. Northumbria neEngland yekuzasi, dzaive nzvimbo dzeAnglo-Saxon, vose vakatendeuka kuita maCatholic.
Tarisai zvakaprofitwa naDanieri:
Rudzi rwevaipikisa rwemaHeruri. MaVhandari, nemaOstrogoth vaive vadzurwa zvakazara. Kwaive kusisina vaipikisa Tiriniti yaive dzidziso yeRoma muEurope.
Meso anotaura pamusoro pehuchenjeri. Meso omunhu. Munhu mumwechete ndiye ainyanya kukosheswa, Petro. Pope akataura kuti munofanira kutarisa mumaziso aPetro kana mafa muchikumbira kuti muzarurirwe musuwo wedenga. Saka munozotariswa naPetro ane makiyi emusuwo wedenga. Hamugoni kuzonyengera Petro. Anokwanisa kuona zvese pamusoro penyu. Anoziva kana maizvininipisa kune akamutsiva, Pope, kana kwete.
Tarisai kunyengera kwemano. Jesu ndiye Musuwo weDenga. Asi haachisiri Muponesi kwavari nekuti Petro ndiye ane makiyi eMukova. Petro ndiye anosarudza kuti vangapinda here kana kwete. Petro akatsiva Jesu semunhu anosarudza kuti vangapinda denga here kana kwete.
“muromo uchitaura zvinhu zvikuru”. Zvinhu zvikuru. Ruponeso runobva pakuterera Petro naPope. Jesu anyenyeredzwa zvakanakisa.
Iyi ndiyo dzidziso yakaipisisa yechiCatholic yaizopararira munyika dzechipegani muEurope.
Kuponeswa nemabasa. Itai zvamunoudzwa naPope kuti muite. Tengai nzvimbo dzenyu kudenga nekupa zvizhinji pamari nezvidimbu zveminda yenyu. Mhuri yega yega inofanira kupa mwanakomana kana mwanasikana semuprista kana nani vatinodaidza kuti sisita.
Tererai Pope sezvo ndiye akatsiva nzvimbo yaPetro iye Petro anozokuzarurirai mukova wedenga kana mukafa. Zvaive zvichitsanangurwa nenzira yekuti zvaitorwa zviri chokwadi chakazara. Mapegani vaibva vanyengereka, vodyira, vobatwa nenzira yekuti vaisazogona kubuda pamusungo uyu zvachose.
Zvino vanhu vakanaka, vakarurama vakavimbika vechiAnglo-Saxon vaifanira kuenda kuEurope yekumusoro vachibva kuEngland kunotora nhau dzaPetro neshungu dzake dzekuzarura mukova wedenga kune avo vanenge vaterera Pope. Kuzvipira kwavo kwese kwaive kuchishandiswa kun’oresa vanhu.
Nekuva nhume dzaPope, mamishinari emaAnglo-Saxon vaive nesimba kare mumaziso emapegani.
Dzidziso dzaPope dzakakwidza kupinda muEngland kubva kuCanterbury dzikapararira muNorthumbria (zvinoratidzwa neruvara rwegirini mumepu inotevera) mumashure mekanzuru yepaWhitby muna 664 AD.
Iyi yaive nguva yekereke yechina Tiyatira inoreva kuti mukadzi anotonga. Mukadzi mucherechedzo wekereke sezvo kereke yechokwadi ndiyo mwenga waKristu. Kereke yeRoman Catholic yaizotonga muEurope muNguva yeRima. Zvinodakadza kuti vakadzi vaviri Bertha naHilda,vakabata basa guru kuti simba raPope rikure muEngland vakabatsirawo kubvisa kurudziro yaColumba, mutumwa kunguva yekereke yechina, muEngland.
Mamishinari makuru eRoma maviri, Bonface naWillibrord vese vaive maAnglo-Saxon, vakashanda zvisina zororo kuti vaparidze kurudziro yaPope muEurope yese. Mepu iri pamusoro apa inoratidza dzimwe nzvimbo dzakashandirwa naBonface.
Mepu inotevera inoratidza nzendo dzaWillibrord apo aiparidzira chiCatholic nesimba guru.
MaAnglo-Saxon aive akanyanya kukoshera Roma kupfurikidza kushanda nesimba kwaiitwa nemamishinari avaitumira kuMusoro kweEurope vakanovaka mamonesitiri. Ava vaishambadza chiCatholic zvakanyanya. Mamonesitiri ndidzo dzaive nzvimbo dzaidzidzirwa muNguva dzeRima. Madzimambo emarudzi evatorwa vaiwanzouraya kuti vatore chinzvimbo vachirarama hupenyu huduku kwazvo uye hwaive hwakaipa huri panjodzi. Marudzi evatorwa akafadzwa kwazvo nekereke yeRoma yaitaura nhema dzekuti yaive yatanga naPetro uye yararama kwemakore mazana mashanu. Kumadzimambo emarudzi evatorwa airarama kwenguva duku, uku kwaive kugadzikika kukuru. Mutsetse wemaPope wairondwa kudzokera kunosvika kumakore mazana mashanu chaive chinhu chikuru mumaonero emarudzi evatorwa. Kuti vave nekurudziro mumarudzi evatorwa aigarorwa zvisina magumo, mamonesitiri akabata basa rakachena achizvininipisa kuna Pope weRoma. Aive munhu aive kure kwazvo asi akafadza mapegani aive muEurope yekumusoro. Pope aive akayananiswa naPetro, munhu mumwechete aive nemakiyi edenga. KumaPegani izvi zvaive zvakanakisa. Petro aive nesimba kwazvo mumaziso emaPegani. Aive nekiyi. MaPope mukati meNguva yeRima vakapinda nemunguva yavakaita huwori kwazvo asi mamonesitiri aive kure kwazvo kuti vanhu vaone izvi, sezvo aive kune rumwe rutivi rwemakomo eAlps, mamonesitiri iwayo aikudza Pope aive achizvisvibisa zita rake kune rumwe rutivi. Makomo eAlps akaita dzimaidzo huru pakati pemaPope nevanhu vaive kune rumwe rutivi zvekuti vanhu havana kuona zvaiitika kwavaive. Saka vanhu vaishanda naWillibrord naBonface vaive vasingatozivi pamusoro pehuwori hwaiitika muRoma. Vaitarisa kereke yeCatholic nemiyenzaniso uye mararamiro avairatidzwa nemamishinari emaAnglo-Saxon aive muEurope yekumusoro. Nekufamba kwenguva monesitiri ine mbiri yakavakwa paCluny uyezve vanhu vekuBurgundi ava vaive vakavanzwa nemakomo eAlps kuti vasaone huwori hwairaramwa nahwo mukereke muRoma.
Saka mamonesitiri emaAnglo-Saxon akatanga chiRoman Catholic muEurope yekumusoro zvikabva zvasimbisa rukudzo rwaipihwa maPope pakati pemapegani apo maPope vaitorasikirwa neruremekedzo urwu muItaly nekuda kwemararamiro avo aive nekutadza kuzhinji.
Rudzi rweChitanhatu MaLormbard
Mauto ekuConstantinople paaive ari pasi pemukuru wehondo Narses pavakaparadza maOstrogothi aisatenda Tiriniti muna 554 AD, maLombard vakamirira kusvikira Narses abuda muItaly paaive ava nemakore 86 ekuberekwa.
Muna 568 AD maLombard akabva apamba Italy yekumusoro neyepakati apo hushe hweRoma hwaiparara muItaly vakatora nzvimbo zhinji dzaive dzichimbotongwa nemaOstrogothi.
Roma neimwe nzvimbo duku yaive yakapoteredza guta zvaive zvichiri pasi pemubati muConstantinople. Pope ari muRoma akaramba achizvininipisa kumubati muConstantinople akazotanga kutadza kubatsira Pope nekufamba kwenguva. Nekufamba kwenguva Pope akatanga kuzviitira sarudzo dzake nekuripira miripo yaifanira kuripirwa nehurumende yeRoma kubva muhomwe yekereke.
Muna 752 AD maLombard vakakanganisa pavakasarudza kutorazve nzvimbo duku yaive yasara yakaratidzwa muruvara rutsvuku, yaive yasarira Roma.
Mubati wekumabvazuva muConstantinople akaramba kubatsira, kunyange zvake aive iye aibata nzvimbo idzi dzaive dzakapoteredza Roma.
Saka basa guru rakabatwa nemaLombard pakusimuka kwekereke yeRoma kwaive kuparadza kuvimba kwaiitwa naPope mumubati aive muConstantinople vakamanikidza Pope kuzvisanganisira munezvematongerwo enyika nemarudzi evatorwa. Rudzi rwevatorwa rwaive nesimba kwazvo rwaive rwemaFrank.
Muna 751 AD Achibhishopu weRoman Catholic wekuMainz, Boniface, akatanga imwe nhorondo paakazodza Pepin samambo werudzi rwevatorwa rwemaFrank.
Pope, Kadhinari, naAchibhishopu ese mazita asimo muBhaibheri.
Pope Stephen II akabva muRoma akaenda kuParis kunokumbira Pepin kuti amubatsire kurwisa maLombard.
Pope Stephen akatora gwaro rakaitwa zvisiri pamutemo akaenda naro raizokonzeresa zvakanyanya. Gwaro iri raidaidzwa kuti Donation of Constantine raitaura kuti Constantine aive apa nzvimbo yenyika yese yekumadokero kuna Pope.
Mugwaro iri Pope akataura kuti ndiye aive mumiririri waPetro uye kuti Petro aive mupostora mukuru aive amire pachinzvimbo chaKristu.
Zvakare, zvaireva kuti kana ukaitira Pope zvakanaka unenge waitira Petro zvakanaka, aive Petro aive nekiyi yekuzarura musuwo wedenga. Kupa minda neruchengetedzo kuna Pope kwaizoita kuti Pepin apinde denga. Kristu ndiye musuwo wedenga. Asi Pope aitaura kuti Petro aive akamira panzvimbo paKristu nekuti Petro ane makiyi eMusuwo saka aive iye Petro aizosarudza kuti ozarura here mukova kana kuti kwete. Saka ruponeso runobva pasarudzo yaPetro, pachinzvimbo chaKristu.
Muna 1754 Pope Stephen akagadza Pepin samambo wemaFrank iye aizofanira kumuchengetedza kubva kuruwoko rwemaLombard.
Muna 756 Pepin akamanikidza maLombard kuti abve munzvimbo dzaive pedyo neRoma akapa nzvimbo hombe kwazvo yemunda kuna Pope. Chipo chaPepin chakawedzerwa ichi chakaratidzwa pamepu neruvara rutsvuku. Nekuti Pepin akamupa minda, Pope akabva atanga kutaura kuti ndiye aive muridzi wenzvimbo iyoyo, zvakabva zvazadzisa kuparadzana kwake nemubati aigara muConstantinople.
Pope aive ava simba rekereke rakazvimiririra achiita zvibvumirano nehukama hwezvematongerwo enyika nemarudzi evatorwa. Chitendero nezvematongerwo enyika zvaive zvabatanidzwa zvaizoburitsa chinhu chakaipisisa kwazvo.
Saka Pope aive anesimba rekugadza madzishe emarudzi evatorwa. Izvi zvakamupa kukudzwa kukuru pakati pemarudzi evatorwa. MaFrank vakabva vava vachengetedzi vaPope, zvakamuita kuti ave nesimba kwazvo.
Minda “Donation of Pepin” yakaitira Pope nheyo dziri pamutemo kuti ave neminda kana nzvimbo dzakazozivikanwa nekunzi nyika dzemapope (Papal States).
Asi mazwi matatu aive mugwaro rakaitwa zvisiri pamutemo iri raidaidzwa kuti Donation of Constantine aizokonzeresa nhunha huru kwazvo.
Mazwi akashandiswa pagwaro iri, akanyorwa muchiLatin, akakosha kwazvo.
... ut sicut B. Petrus in terris VICARIVS FILII DEI esse videtur anoshandurwa achinzi .... sezvo Petro akakomborerwa achionekwa akagadzwa pachinzvimbo cheMwanakomana waMwari panyika.
MuchiLatin kune mavara akati kuti anokwanisa kumira panzvimbo yemanhamba kana zviverengo.
MuchiLatini I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500.
Iyi ndiyo yega nguva munhorondo yekuti VICARIVS FILII DEI yakanyorwa mugwaro uye raireva munhu mumwechete Petro. Petro haangapomerwe mhaka apa. Haana kubvira azvidaidza kudaro.
MuchiLatin U anomiririrwa na V sezvo V riri nyore kunyora pamabwe sezvo iri mitsetse yakatwasuka.
Tichiri kutaura W anova V V sa “dhabho U”.
5 1 1 5 1 50 1 1 500 1 tikabatanidza kuverenga uku kunoburitsa 666.
Munhu wezvivi wenguva yekupedzisira achange ari Pope wekupedzisira.
Romulus akatanga kuvaka guta reRoma. Augustus aive mubati wekutanga muRoma.
Mubati wekupedzisira aive Romulus Augustulus.
Saka munhu wekupedzisira muRoma, akatora mazita evanhu vekutanga.
MaCatholic anoti Pope wekutanga aive Petro. Saka Pope wekupedzisira achadaidzwazve kuti Petro II.
ZVAKAZARURWA 13:17 Kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga nokutengesa, asi iye unechiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho.
Saka Petro II ndiro richave zita rechikara chekupedzisira, nekuti saPope achave musoro wesangano rese rekereke rine hunhu hwechikara. Zita rekuti Petro rakayananiswa neVICARIVIS FILII DEI chiverengo muchiLatin chinoburitsa 666.
Chiratidzo chechikara chitendero chemasangano. Chinotenda dzidziso dzakaitwa nevanhu, pachinzimbo cheMagwaro akanyorwa. Kutenda munezvinofungwa nevatungamiri vemakereke zvinoita kuti kunamata Mwari kwedu kuve kunamata pasina.
Huchenjeri ndihwo chipo cheMweya Mutsvene chekutanga.
I VAKORINTE 12:7 Asi mumwe nomumwe unopiwa kuratidzwa kwoMweya, kuti vose vabatsirwe.
8 Nokuti mumwe unopiwa noMweya shoko rovuchenjeri, mumwe shoko rokuziva noMweya iwoyu;
Huchenjeri hunotigonesa kubatanidza Magwaro pamwechete kuti tive neruzivo rwekuti chii chakanaka uye chii chakaipa.
Humbowo hweRubapatidzo rweMweya Mutsvene ndiko kugona kunzwisisa chokwadi cheShoko raMwari rakanyorwa.
Rudzi rweChinomwe maFrank
Muna 774 AD mwanakomana waPepin Charlemagne, aive aitwa mambo wemaFrank, akapamba maLombard akavamedza kuti vave chikamu chehushe hwake hwemaFrank.
Saka maLombard vakabva vanyangarika munhorondo asi vaive vaita basa guru rekubvisa Pope pakuvimba nemubati aive muConstantinople, vakaita kuti Pope ayanane nemarudzi evatorwa vaizoita nyika dzemuEurope nguva yaizouya. Nekugadza madzimambo avo, Pope akawana simba rakakurisa pakati pemaruzi evatorwa. Makore akapoteredza 860 AD Pope aive nesimba kwazvo Nicholas I akatanga kupfeka korona kuratidza kuti aive akangofanana namambo. Gore 1300 richangodarika korona iyi yakavandudzwa kuita zvidanho zvitatu ikazopfekwa nemaPope kwemakore anodarika 600.
Muna 800 AD Pope Leo III akawana mbiri huru paakagadza Charlemagne, mambo mukuru kwazvo pakati pemadzimambo emarudzi evatorwa ese, achimuita mubati weRoma. Nekugadza mubati , Pope aive akukwanisa kuzviti aive mukuru pamusoro pavo vese sezvo aive pamusoro pemubati kana mambo.
Izvi zvakabatsira kutanga Hushe kweRoma Tsvene kumadokero. Voltaire, mumwe wevaisatenda mune zvezvitendero akataura kuti Hushe hweRoma Tsvene hwaive husiri hutsvene sezvo Charlemagne aive auraya maSaxon 4500 nezuva rimwechete sezvo vaive varamba kutendeuka kuita maCatholic. Chaive chisiri chiRoma sezvo chaive chiGerman uye hwaive husiri hushe sezvo waive musanganiswa wenyika dzaibatanidzwa nechisimba.
Saka maFrank akaita Pope munhu ane simba kwazvo uye ane mbiri. Charlemagne, mambo wemaFrank, akapamba Saxon, ndiyo yaive nzvimbo hurusa yeItaly, nechidimbu cheSpain. Nzvimbo dzemaPope dzakapihwa nemaFrank kuna Pope, kuti ave muridzi weminda kana nzvimbo muItaly, dzakaratidzwa muruvara rwemutsetse mutsvuku unodarika nepakati peItaly.
Mumashure mekupamba nzvimbo Charlemagne aizoda kuitora oiita yake. Saka akatumira mamishinari echiCatholic kunotendeutsa maHedeni. Pope aive akasununguka kupa mamonk kuti vave mamishinari uye kuti vavake mamonesitiri munzvimbo itsva idzi.
Kupararira kwakaita kupamba kwaCharlemagne, ndiko kupararirawo kwakaita kurudziro yaPope munzvimbo idzodzo.
Rudzi rweChisere maBurgundi
MaBurgundi vakauya muHushe hweRoma yekumadokero vakakurirwa zvakaipisisa nemaHani. Vakabva vaenda kumberi kwekumadokero vakanogara munzvimbo inozivikanwa nekuti Burgundi muFrance.
Vakatendeuka kuva maCatholic asi havana zvakawanda zvavakaita kusvikira kwavakwa monesitiri yainzi Cluny muBurgundi muna 910 AD. Vatungamiri vemonesitiri iyi vaive vanhu vakanaka kurudziro yavo ikapararira kusvika kure. Vakazivisa pfungwa itsva yekuita mamonesitiri matsva vana vemonesitiri yekutanga “mai” vemamonesitiri Cluny. Vakasvika pamusoro-soro muna 1150 apo mamonesitiri anosvika 1400 aive achitarisira kuhutungamiri hweCluny. Kusvikira apa mamonesitiri mazhinji aive azvimiririra. Apa hurongwa hwaive hwavapo hwekuti monesitiri imwechete ndiyo inenge iri pamusoro peese.
Kuti ive nesimba pamusoro pemamwe mamonesitiri, Cluny yakazviisa pasi paPope. Saka Cluny yakashandisa kukudzwa kwaPope nezita raPope aive kure kuti iite simba pamusoro pemamwe mamonesitiri aivakwa. Mumashure merufu rwaColumba muna 597, kwaive kusina muparidzi akazvimiririra muEurope aikwanisa kukwikwidza mbiri yaPope pakati pemarudzi evatorwa echipegani. Nzira iyi, yekuti simba pamusoro pemamonesitiri raive rakaiswa mumaoko emunhu mumwechete anotungamirira, yakazotevedzerwa nemamwe mapoka echiCatholic akaita seremaJesutu. Mamonesitiri akawanda akauya akazviisa pasi pesimba remutongi mumwechete weRoma saka kubata kwedare kwezvitendero zvakarongwa nevanhu kwakabva kwaparadzira rima guru pamusoro peEurope yekumadokero. Ichi chaive chimwe chezvikonzero zvikuru zvakaita kuti kereke yeRoman Catholic isimuke kuva nesimba pamusoro peEurope yekumadokero mukati meNguva yeRima. Hudzvanyiriri hunobva pamunhu mumwechete, hwaishandiswa naPope, aimisikidza nzvimbo yesimba rekereke muRoma nekuunza mamonesitiri aive akapararira neEurope yekumadokero yese kuti ateerere zvese zvaidiwa neRoma, yaive nzira yakanakisa yemasangano akarongwa nevanhu yekukura kwekereke yeRoman Catholic.
Vatungamiri paCluny vaiwanzova varume vakanaka vanoremekedzwa nemapegani. Muenzaniso wavo waivaka mbiri yekereke yeCatholic yakanaka kure neRoma mukati memakore 150, kubva muna 900 kusvika muna 1050 kurudziro yeCluny yakatsakatika sezvo zvikonzero zvakaipa zvehupfumi nesimba zvakavakurira. Asi Cluny yaive yatanga nzira yemasangano akarongwa nevanhu anoenda pasi pehudzvanyiriri hwaPope hwaizoita kuti kereke yeRoman Catholic ienderere mberi.
Makereke emasangano akabuda muCatholic akazozvitsaura kubva kwairi mumashure megore 1520, zvino makereke aya vanasikana vaizoita hunhu hwekereke yeRoma amai vavo nekuitawo nzvimbo dzavaiti mizinda yesimba rechitendero chavo yaive iri pasi pehutongi hwehutungamiri hwevanhu, apo sangano rimwe nerimwe raisimbisa zvaraitenda netsika dzaro pamusoro pevanhu varo vari pasi rese. Saka kana chiRoman Catholic chiri chikara kana simba resangano rezvechitendero riri pasi pehutungamiri hwemunhu, saka masangano maduku kwariri akaripikisa akabuda mariri mifananidzo yechikara chimwechete asi achitungamirirwa nevanhu vakasiyana chete.
Rudzi rwechipfumbamwe maSuevi.
Nekuti simba rekereke yeRoman Catholic muEurope yekumadokero raive ratangwa, yaive yanguva yekuparidzira simba rekereke pasi rese.
MaSuevi ndivo vakazoita maPutukezi anhasi.
Marudzi maviri emarudzi evatorwa ekutanga, maSuevi nemaVisigothi, vakaita rwendo rurefu vachidarika nehurefu hweEurope yekumadokero vakanogara mumahombekombe eAtlantic eSpain nePortugal. Vakazobudirira zvishoma nezvishoma kubva pamarudzi evatorwa kuva nyika dzemuEurope dzechimanje-manje.
Vakadzidziswa kwemakore 800 nemaMosiremu echiMoor vakabva kuNorth Africa muna 711 AD vakanotonga Spain nePortugal mukati meNguva dzeRima. Pasi pekutonga kwemaMoor dzidzo yaive yemunhu wese asi vamwe vese muEurope yekumadokero vaive vasina kudzidza, vaive nedzimba dzekuverengera dzinonzi maraibhurari anosvika makumi manomwe aive akaitirwa ruzhinji asi Europe yese yaive isina uye vaive nemayunivhesiti gumi nemanomwe zvichienzaniswa neEurope yekumadokero yaive nemaviri chete. MaMoor vakazivisa mapepa vakabvisa manhamba eRoma vakaatsiva nemanhamba atinawo nhasi uno. Vakazivisa metsi zhinji uye kambasi kuti ibatsire nekufamba mugungwa.
Saka maMoor vakasimudzira maVisigothi nemaSuevi echiCatholic munezvedzidzo zvekuti mumashure merwendo rurefu vachienda kumuganhu weEurope, vaive nezvakakwana kuti vanopinda mugungwa reAtlantic uye kuti vatenderere pasi rese kuti chiCatholic chiparidzwe pasi rese.
MaPutukezi vaive vatanga kufamba munhivi dzeAfrica negore 1419 vakatanga kutengesa nhapwa muna 1441. maPutukezi vakasvika kuIndia muna 1498, uye kuBrazil muna 1500. Vakavaka mafoti nemapositi munhivi dzegungwa dzakawanda nekukasika vakabva vazviitira hushe hwavo hwepasi rese, zvakaratidzwa muruvara rutsvuku pamepu inotevera.
Nzvimbo imwe neimwe yaive igere maPutukezi yakava nzvimbo yaiparidzwa dzidziso dzechitendero cheRoman Catholic, zvakabva zvaiita kereke yepasi rese yaizvininipisa kuna Pope.
Rudzi rwechigumi maVisigothi
MaVisigothi vakazova maSpanishi. Vakafamba rwendo rurefu kuti vanosvika kuEurope yekumadokero.
MaSpanishi vakabva vayambuka Atlantic vakanopamba nzvimbo zhinji muAmerica nezvitsuwa zveFirisitia kumabvazuva.
Goridhe zhinji nesirveri rakaendeswa kuSpain richibva kuAmerica. MaSpanishi akaramba achitsvaga pfuma zhinji, saka mamishinari echiCatholic akatevera mauto vakanotendeutsa vanhu vaigara munzvimbo dzeko kuita maCatholic. Hushe hukuru hweSpain hwakaburitsa maCatholic akawandisa pasi rese. Goridhe nesirveri zvakabva kuAmerica zvichienda kuna Pope zvakabatsira kutsiva mari yaaive arasikirwa nayo pakagamuchirwa Martin Luther nemutsiridzo yake neEurope yekumusoro zvikabvisa mari zhinji mukereke.
Mepu iyi, muruvara rwakadzima, inoratidza kukura kwenzvimbo dzeAmerica dzaive dzapambwa neSpain.
Chidimbu cheyero yaive Brazil yaive yapambwa nemaPutukezi.
Nguva dzeRima dzaive dzapera pakatanga Rumutsiridzo muna 1520.
Kereke yechokwadi yaive yakufanira kudzoserwa pakereke yekutanga yemapostora. Martin Luther muGermany akatora nhanho yekutanga paakaparidza kuponeswa nenyasha kupfurikidza kutenda.
Asi kereke yeCatholic yaive nekubata kwakasimba pamusoro peEurope yekumusoro totenda Spain nePortugal kereke yeCatholic yakanga yapararira kunzvimbo zhinji pasi rese.
Saka marudzi gumi evatorwa aive aparadza Hushe hweRoma, vaive vatangawo kereke yeRoman Catholic kubva mumatongo ehushe hweRoma vakaibatsira kuti ive kereke yepasi rese. Musoro wehushe hweRoma (chikomo chepamutsetse mukuru chikomo cheCapitoline kana guta guru netemberi yacho yeJupita) waive wakuvadzwa wapihwa ronda rekufa nemarudzi evatorwa sezvo wakarasikirwa nesimba rawo rese, waive wapora nekuti muzinda weLaterani pachikomo cheCaelia ndiwo waive wava muzinda mukuru wekereke yeRoman Catholic. Pope akatsiva mubati weRoma aive awa, izvozvi anotonga pasi rese kupfurikidza kereke yeRoman Catholic. Chimiro chesangano reCatholic nekubata kwaro kwekuita munhu anotungamirira kereke kwakapindawo mumasangano emakereke asiri Catholic akabuda mairi nekuti vaipikisa dzidziso dzayo. Simba rekanyanga kaduku, Vatican nezvigaro zvayo, rakaramba richikura.
DANIERI 7:10 Rwizi rwomoto rwakanga rwuchibuda ruchibva pamberi pake; zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine gumi zvezviuru zvine gumi; kutonga kukatanga, bhuku rikazarurwa.
DANIERI 7:7 ... ndikaona mhuka yechina, ... yakanga ine nyanga gumi: mutongo waive watemwa
Roma yakakurira vakamboikurira. Marudzi gumi evatorwa akaparadza Roma yechipegani akabatsira kutanga kwekereke yeRoman Catholic iri kuendesa nyika kunotongwa.